Shirkadda Twitter oo Si Kamadambeys ah u Hikisay Akoonka Ololaha Trump – Goobjoog News
Shirkadda Twitter oo Si Kamadambeys ah u Hikisay Akoonka Ololaha Trump
Shirkadda Twitter ayaa sababo laxariira ku xadgudubka xeerarka shirkadda uhakisay akoonkii ololaha doorashada Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii mareegta ololaha Trump lasoo galiyay sawirka astaanta shirkadda, oo uu lagu dahaaray, calanka shuuciyadda.
Mar sii horreysay, shirkadda ayaa xirtay akoonka gaarka ah ee madaxweyne Trump, waana markii ugu horreysay ee ay shirkadu mamnuucdo koontada madaxweyne waddan. Koontada Trump ayaa lahayd in ka badan 88 milyan oo qof oo raacsan,
xayiraadda waxay ka dhigantahay aamusinta trump maalmahiisa ugu danbeeyay ee ka hor dhammaadka xilligiisa. Talaabadan ayaa timid kadib sanado badan oo muran uu ka taagnaa sida shirkadaha baraha bulshada ay u maareeyaan akoonada hogaamiyaasha aduunka ee awooda badan.
Trump ayaa si isdaba joog ah u isticmaalyay Twitter-ka si uu u cadeeyo in guuldaradiisiii ​​doorashadii 3-dii Nofeembar ay sabab u tahay musuqmaasuq baahsan, isaga oo taageerayaashiisa ku booriyay inay yimaadaan Washington Arbacadii hore soona buuxdhafiyaan aqalka Congress-ka ee Capitol Hill si ay uga mudaaharaadaan natiijada doorashada.
Maxamed Deeq “Waa Mas’uuliyad Adag In Lagaaga Yeero Xulka Qaranka”
Xasan Sheekh"Dowladdu Waa Iney Shacabka U Sharaxdaa Sababta Jubbaland Aysan Umaamulikarin Labada Goobood Ee Doorashada